19 kiheba ho an'ny React from Material Design mankany amin'ny tsotra sy intuitive | Famoronana an-tserasera
19 Vahaolana reza ny karazan-karazany rehetra amin'ny fandaharam-potoana sy maro hafa
Efa amin'ny fotoana mizara andian-dahatsoratra ho an'ireo faritra web ireo izahay izay te-hanoratra andiana hetsika maromaro izahay. Izy ireo izao 19 vakizoro manana tanjona mitovy amin'izany, na dia ao amin'ny React mba hahitanao ny tonga lafatra izay mamaritra ny zava-mitranga amin'ny fizotry ny fotoana na ny tantaran'ny orinasanao miaraka amina lahatsoratra mifandraika.
Ao amin'ity fanangonana tabilao 19 React ity dia misy sady marindrano no mitsangana ary afaka daholo izy rehetra. Azonao atao araka izany itiavanao azy ireo izany. Andian-kiheba izay mandrakotra ny karazan-java-ilaina rehetra hanarahana ny fenitry ny famolavolana tranonkala amin'izao taona 2018. Andao hatao amin'ny tabilao 19 React izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha.
1 React Tiny Tabs
2 Manehoa refafao re
3 Manehoa takelaka amin'ny Internet
4 Manehoa takelaka misy valiny
5 Vahaolana azo zahana
6 Fitaovana takelaka
7 Mamaly ny fitetezana kiheba
8 React TabTab
9 React Aria Tabpanel
10 React Tabbordion
11 Takelaka misy valiny haingana
12 Mamalia ny fomba fijerin'ny swipe
14 React Tabs
15 M- Takelaka
16 Vahaolana momba ny vatan'ny vatan'ny tanindrazana
17 React View Native Tab View
18 Mametraha navigator vakizoro teratany
19 React Tabs Native
React Tiny Tabs
Singa iray momba ny react miaraka amin'i safidy fototra hanamboarana azy ny lohahevitra. Avy amin'ny pejy ohatra dia azonao atao ny mahita ireo fizotran'ny firafitra samihafa izay miteraka takelaka fototra misy endrika kely hafahafa.
Manehoa refafao re
Avy amin'ny codeandbox azonao atao midira amin'ny fampisehoana an'ity tabilao ity ho an'ny React manavaka izany ny afaka ampiasaina indray. Araka ny hita amin'ny ohatra dia tabilao fototra izy ireo miaraka amin'ny fampahalalana tianay omena ao amin'ny tranonkalantsika. Manana ny fampahalalana mifandraika rehetra ianao amin'ny fampisehoana.
Manehoa takelaka amin'ny Internet
Miaraka amin'ity takelaka ity ho an'ny React azontsika atao misafidy fisie marindrano na iray hafa mankany amin'ilay mitsangana. Izy io dia miavaka amin'ny maha-maodely sy azo idirana an'ireo kiheba sasany izay azonao jerena amin'ny ohatra nasehon'izy ireo mba hampiasa azy ireo mifanaraka amin'ny tranokalanao.
Manehoa takelaka misy valiny
Takelaka misy valiny momba ny React izay miavaka amin'ny maha-izy azy ho an'ny finday. Ao amin'ny pejy ohatra dia afaka mahita safidy isan-karazany ianao hijerena ny tsirairay amin'ireo fanaingoana omena ireo takelaka ireo ho an'ny React.
Tsy manadino ny anao Github.
Vahaolana azo zahana
Singa iray azo idirana amin'ny kiheba ho an'ny React. Tsotra be amin'ny fotony rehetra ho an'ny fizarana telo izay aseho amin'ny ohatra omena anao mba hahafahanao mahazo hevitra momba ireo takelaka ireo ho an'ny React.
Eto izahay dia tsy manana pejy demo hijerena io kiheba io ho an'ny React in situ, fa afaka mandeha amin'ny tranokala amin'ny github ianao mba hitondranao ny kaody rehetra eny an-tananao Izy io dia fonosana React izay manome singa an'ny kiheba ho an'ny Material Design, ny fiteny famolavolana avy amin'i Google izay niaraka taminay nandritra ny taona vitsivitsy izao. Eto ianao dia afaka miditra amin'ireo fitaovana navoaka nataon'i Google hampiasa Material Design.
Mamaly ny fitetezana kiheba
React tabs navigate dia singa kalitaon'ny React mamela anao mamela ny fizahana amin'ny takelaka ao amin'ny app web anao. Avy amin'ilay rohy mitovy amin'ilay pejy ohatra dia azonao atao ny miditra amin'ny Github-nao hijerena ny fehezan-dalàna sisa.
React Aria Tabpanel
Mamela anao hifandray amin'ireo takelaka miaraka amin'ny fanalahidy zana-tsipìka ho an'ny singa React tena miovaova izay mamela fanaingoana lehibe. Manana ohatra isan-karazany ianao avy amin'ny pejin'ny demo.
Singa iray hafa ho an'ny React izay manana karazana safidy fanamboarana rehetra toy ny adiresy amin'ny tahiry. Universal sy semantic dia mamela anao hamorona fifanarahana sy kiheba ho an'ny tranonkalanao. Tsy misy tsy fahampian'ny antsipiriany amin'ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny fampiharana azy.
Takelaka misy valiny haingana
Singa iray momba ny tabilao ho an'ny React izay mampiasa azy malefaka sy ny tontolon'ny agnostika. Tonga lafatra amin'ny fandefasana kiheba fidirana mora. Ny fampahalalana rehetra, ary koa ny rohy mankany amin'ny tahiry ao amin'ny Github dia azo alaina avy amin'ny pejy ohatra nomena.
Mamalia ny fomba fijerin'ny swipe
Component for React ho an'ny tab sy ny fomba fijery tafiditra ao anatiny alao sary an-tsaina amin'ny alàlan'ny fihetsika. Tonga lafatra ho an'ny tranonkala natokana ho an'ny finday. Manana ohatra amin'ny safidy isan-karazany ianao ao amin'ny pejy ohatra mba tsy halainao amin'ny antsipirihany ity singa React ity.
Singa iray ho an'ny takelaka React izay manana ny mampiavaka azy ao amin'ny tranokala ohatra safidy nomena hanamboarana azy. Ny fampahalalana rehetra dia voalamina tsara mba hahafahanao mampihatra an'io singa io mora foana.
Takelaka zanatany ho an'ny React roa ho an'ny tranonkala toy ny an'ny tompon-tany. Manana ohatra maromaro ao amin'ny pejy nomena ianao hahitana ny fomba fitondran-tenan'ity singa ity. Ao amin'ny zorony ambony havanana dia manana ny rohy mankany amin'ny tahiry Github ianao raha te hahalala bebe kokoa na hitondra azy amin'ny tranokalanao.
Vahaolana momba ny vatan'ny vatan'ny tanindrazana
Araka ny tondroin'ny anarany dia mikendry ny Design Material ho an'ny fampiharana ny kiheba. Tsy manana pejy ohatra izahay, fa manana tahiry Github izay ahitanao izay rehetra ilaina amin'ny fampidirana azy.
React View Native Tab View
Mametraha navigator vakizoro teratany
Singa iray ho an'ny takelaka React izay mamorona a browser tsara miampy bar ny volomaso.
React Tabs Native
React Native tab tahaka ny sehatra mahaleo tena afaka ampiasaina amin'ny kapoka ambany ary koa ny fomba fijery fizarana. Vitao ity andiany kiheba ity ho an'ny React. Avelanay miaraka amina andiam-endrika amin'ny CSS ianao mba hahafahanao mijery azy tsara ary hahitana raha tsara ho an'ny tranonkalanao izy ireo.
Ahoana ny fomba hisafidianana solosaina finday ho an'ny famolavolana sary
Ny sary mahavariana an'ny rivotra Buddhist of Burma